50 Common Grammar Mistakes in English (5) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:45 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
တတ်၍ ရေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ ၊ ငတ်၍ရေးခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ ၊ ၀ါသနာပါ၍ ရေးခြင်းလည်း
မဟုတ်ပါ ။ သိသမျှထဲကနေ မျှဝေလိုသောစိတ်ဖြင့်သာ ရေးပါသည် ။ ဗဟုသုတများကိုသာမက စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုများ မေတ္တာတရာများ ခင်မင်မှုများကိုပါ ပေးလိုခဲ့ပါသည် ။ သို့သော် နားလည်အောင် မဖေါ်ပြနိုင်ခဲ့သော် ခင်မင်စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ဆက်လက်အားပေးကြပါလို့ ...
. (36) Wrong : My brother has 30 years. Right : My brother is 30 (years old). ကျနော့်အကိုက အသက် ၃၀ ပါ ။ . အသက်ကို ပြောတဲ့အခါ အသုံးများတဲ့ ပြောနည်း (၃) မျိုးရှိပါတယ် My brother is 30. My brother is 30 years old. My brother is 30 years of age. စသည်ဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး ပြောတဲ့ အခြားနည်းလေးတွေလည်း တစ်ခါတရံမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ ................................................ (37) Wrong : I want eat now. Right : I want to eat now. အခု ကျနော် အစာစားချင်တယ် . Want = ရချင်သည် လိုချင်သည် (want + noun) I wantacar. ကျနော် ကားတစ်စီး/လိုချင်တယ် . Want to = ချင်သည် ( want to + V1) I want to go to Italy. ကျနော် အီတလီကိုသွား/ချင်တယ် . Want = သင့်သည် ၊ အပ်သည် (want to be + adj) (I နဲ့ we အတွက်တော့ ဒီအဓိပ္ပါယ်မယူရပါ) You want to be careful. ခင်ဗျား ဂရုစိုက်/သင့်တယ် (ကျနော်က ထူးဆန်းပြီး ဘာသာပြန်ပြတာ မဟုတ်ပါ ၊ အဘိဓါန်တွင် ပါသော အဓိပ္ပါယ်သာ ဖြစ်ပါတယ် .............................................. (38) Wrong : You are very nice, as your mother. Right : You are very nice, like your mother. ခင်ဗျားက ခင်ဗျားအမေလိုပဲ သိပ်သဘောကောင်းတယ်နော် . ဒီမှာ as your mother က ခင်ဗျားအမေအဖြစ်နဲ့ ..လို့ ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး , like your mother က ခင်ဗျားအမေလိုပဲ ..လို့ ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခု ဒီမှာ As နဲ့ like နှစ်ခုလုံးက preposition (၀ိဘတ် ၊ ဆက်စပ်မှုပြစကားလုံး) အဖြစ် သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ as ကို conjunction (စကားဆက်) အဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ် ။ conjunction အဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာတော့ as + S + V ပုံစံ သုံးရပါတယ် ................................................ (39) Wrong : She said me that she liked you. Right : She told me that she liked you. သူမက ကျနော့်ကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် . Say ကိုသုံးတဲ့အခါ object မလိုပါ ၊ tell ကိုသုံးလျှင် object ထည့်ပါ ။ .................................................................. (40) Wrong : My husband engineer. Right : My husband is an engineer. ကျမအမျိုးသားက အင်္ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်ပါ . ဘယ်သူက ဘာဖြစ်တယ် လို့ ရေးချင်လျှင် ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်မယ် (နည်းကြိုက်လျှင်ယူပါ - ရှင်းလင်းတင်ဆက်ပုံ တစ်မျိုးလေးပေါ့) My husband = engineer အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားက နာမ်တွေရှေ့မှာ တိကျစေချင်တဲ့အခါ article ထည့်ပေးရပါတယ် ( မြန်မာလိုမှာကျ.. ကျမယောက်ျားက အင်္ဂျင်နီယာပါ .. ဆိုပြီး “တစ်ယောက်” ဆိုတာ မပါလည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်)
My husband ကရှေ့မှာ My ဆိုတဲ့ possessive case (possessive adjective) ဖြစ်ပြီး possessive determiner လည်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပြအညွှန်းစကားလုံးပါနေလို့ တိကျပြီးသားမို့ article ထည့်ဖို့မလိုဘူး ၊ noun တစ်ခုရှေ့မှာ determiner နှစ်လုံးထပ်ပြီး သုံးလေ့မရှိပါဘူး . Engineer က တစ်ယောက် ..နှစ်ယောက် စသည်ဖြင့် ရေတွက်လို့ရတဲ့အတွက် a, an , the တစ်ခုခု ထည့်ပေးရတော့မယ် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဆိုတဲ့ အသံထွက်ရဲ့ အစစာလုံးက သရသံ(“အ”သံ)ဖြစ်နေပြီး တစ်ယောက်လို့ ဆိုချင်တာကြောင့် an ထည့်ပါမယ် ။ ဒါကြောင့် My husband = an engineer ဖြစ်သွားပြီ ၊ ညီမျှခြင်းနေရာမှာ သင့်တော်ရာ V-be လေးထည့်ပြီး ၊ နောက်ဆုံးမှာ full-stop လေးထည့်လိုက်ပါ ။ ရပါပြီ ။ My husband is an engineer. လို့ .. .
ပြီးသွားပြီဆိုမှ မှားနေတဲ့ sentence ကို ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တိကျမှုမရှိဘူး ၊ ညီမျှခြင်းပြ (noun နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပေးတဲ့) စာလုံး မပါဘူး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိသွားပါပြီ ။ ...... အဲလိုပဲလေ ကျနော်တို့မှာ လိုအပ်နေတဲ့ အချက်လေးတွေကို ရှာဖွေပြီး .. သိပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပါ ၊ ဒါကြောင့် တည်ဆောက်ပုံမှန်ကန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ ဘ၀ရဲ့ ၀ါကျလှလှလေးတွေ ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေလို့ မေတ္တာပို့သလိုက်ပါကြောင်း .. sunglasses emoticon . မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့